डिप्रेसनले डुबाउँदैछ अस्ट्रेलियामा नेपालीलाई - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
 करिब एक महिना अघिमात्र ब्रिसबेनमा रहेका अमन नामका एक नेपाली युवाले आत्महत्या गरे । उनले पारिवारिक समस्याका कारण आत्महत्या गरेको भनिएको छ । अर्कातिर त्यसको केही साताअघि नै सिड्नीको समुद्री किनारमा एक नेपाली युवती मृत अवस्थामा फेला परिन् । उनले आत्महत्या गरेको बताइएको छ ।
 गत पुसमा सिड्नीको न्युक्यासल बस्ने नेपाली नर्स तृप्ति पाण्डेले आत्महत्या गरिन् । परिवारसहित सिड्नीमा बस्दै आएकी पाण्डे आफैं मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत थिइन् । अरूलाई मानसिक रोगसँग लड्न परामर्श दिने तृप्ति आफैं त्यही मानसिक रोगको सिकार होलिन् भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्, तर भयो त्यही । उनले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याका कारण अर्थात् मानसिक रोगसँग लड्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजिन् । उनको मृत्युको कारण पोस्ट माटिरनल डिप्रेसन बच्चा जन्मिएपछि हुने मानसिक रोगका कारण भएको बताइन्छ ।
 नयाँ वर्षको सेलिब्रेसन नसकिँदै सिड्नीस्थित नेपाली समाज शोकमा डुब्यो । किनभने सिड्नीकै लिड्कममा बस्दै आएकी नेपाली विद्यार्थी अस्मिता रिजालले आत्महत्या गरिन् । चार वर्षअघि अध्ययनका क्रममा अस्ट्रेलिया आएकी २३ वर्षीया अस्मिता सिड्नीस्थित इलाइट कलेजमा बिजनेस म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गर्दै थिइन् । हक्की र पढन्ते स्वभावकी रिजाल पछिल्लो समय आर्थिक समस्या, सम्बन्ध र स्वास्थ्यका कारण चिन्तामा रहने गरेको उनका साथीहरूले बताएका थिए ।
यीत प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको अस्ट्रेलियामा मानसिक रोगकै कारण आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालीहरू सबैभन्दा बढी बसोबास गर्ने सिड्नीमा मात्र अहिलेसम्म मानसिक रोगकै कारण आधा दर्जनभन्दा बढीले आत्महत्या गरिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अथाह अवसरको खानी मानिएको पहिलो विश्वको विकसित देशमै नेपालीहरूमा मानसिक रोग प्रमुख समस्याका रूपमा झांगिन थालेको छ ।
विगत एक दशकमा नेपालीहरूको जनसंख्या बढेसँगै मानसिक रोगको चपेटामा पर्ने नेपालीहरूमा समेत वृद्धि भएको हो । यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका ५ नेपालीमध्ये १ जनामा कुनै न कुनै मानसिक समस्या छ । यद्यपि नेपालीहरूमा देखिएको मुख्य समस्या नै आफूमा मानसिक रोग छ भन्ने स्वीकार नगर्ने र थाहा भए पनि चिकित्सकको सेवा लिन नजानु भएको मानसिक रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
विशेषत: मुख्य रूपमा नेपालबाट उच्च अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरूमा यो समस्या देखिँदै आएको छ भने अस्ट्ेरेलियाका विभिन्न राज्यमा व्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूमा समेत यही समस्या देखिएको छ । अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका सामाजिक संस्थाहरू नेपालीहरूमा देखिएको मानसिक रोगका बारेमा जनचेतना फैलाउने कार्यमा नै आफूहरूलाई केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
अस्ट्रेलियामा अहिले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञका रूपमा काम गर्ने दुई जना नेपाली चिकित्सक छन्, जसमा मेलबर्नमा डा. अनुपम पोखरेल छन भने सिड्नीमा डा. घनश्याम खड्का । त्यसका साथै अहिले मानसिक स्वास्थ्यमा विशेषज्ञता हासिल गरिरहेका आधा दर्जनजति चिकित्सक छन् भने दुई दर्जनजति नेपाली नर्सले मानसिक रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारको तथ्यांकअनुसार मानसिक रोग यहाँ मृत्युको कारकमध्ये १३ औं नम्बरमा छ । मानसिक रोगबाट यहाँ प्रत्येक वर्ष २ हजार ७ सय ९५ जनाले आत्महत्या गर्छन् भने सन् २०१६ मा उक्त संख्या २ हजार ८ सय ६६ थियो । अस्ट्रेलियाको केन्द्र र राज्य सरकारले मानसिक रोग भएकाहरूलाई उपचारका लागि विभिन्न गोप्य परामर्श तथा उपचारसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा आफ्नो परिवारको छत्रछायाँमा रहनेहरू यहाँ आएपछि सबै जिम्मेवारी आफैंले बेहोर्नुपरेपछि पनि तनाव पर्छ । अर्कातिर यहाँ जे अपेक्षा र सपना देखेर आएका हुन्छन् त्यो सपना र अपेक्षा व्यवहारमा नपाएपछि उनीहरू मानसिक समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालबाट लाखौं खर्च गरेर यहाँ पठाएपछि अभिभावकहरूले गर्ने अस्वभाविक अपेक्षा पनि मानसिक रोगको मुख्य कारकका रूपमा देखिएको छ ।
यहाँको मानसिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका विशेषज्ञ चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा नर्सहरू नेपालीहरूमा मानसिक रोग बढ्दै जानुमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जागरूक नहुनुलाई नै मान्छन् । अर्कातिर आफूमा मानसिक समस्या रहेको थाहा भए पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्नु र स्वीकार गरिहाले पनि समयमै उपचार नगर्नुले समस्या थप्दै गएको बताउँछन् । समयमै थाहा पाएर उपचारको खोजी गर्ने हो भने अन्य रोगजस्तै मानसिक रोगको पनि सहज उपचार हुने चिकित्सकहरूको दाबी छ ।
यहाँका नेपालीहरू विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियासम्म ल्याउन पहल गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूले गर्नुपर्ने जति जिम्मेवारी पूरा नगरेको गुनासो पनि गर्छन् भने यहाँका नेपाली समुदायले समेत यसको रोकथाम र सूचना सम्प्रेषणका लागि सक्दो पहल नगरेको गुनासो धेरैको छ । यहाँ रहेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई व्यवसायका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको र आवश्यकताअनुसार उचित सल्लाह, सुझाव, सम्पर्क र सहयोग नगरेको एकथरीको गुनासो छ भने अर्कातिर व्यवसायीहरू आफूहरूले गर्नसक्ने गरिरहेको र सबैलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन् ।
मेलबर्नमा मानसिक रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहेका डा. पोखरेल समयमा रोगको उपचार नगर्नु नै मानसिक रोग बढ्नुको मुख्य कारक भएको दाबी गर्छन् । उनी आफूले उपचार गर्ने अधिकांश बिरामी समयमा उपचार गर्न नआउने र रोगले च्यापिसकेपछि मात्र उपचारका लागि आउने अनुभव सुनाउँछन् । डा. पोखरेल मानसिक रोग पनि अन्य रोगजस्तै सामान्य रोग भएको बुझाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिले पनि मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो रोग स्वीकार गर्न र समयमै उपचार गर्न ग्लानी हुने गरेको छ— डा. पोखरेल भन्छन् । उनी यो रोगका बिरामी समयमै सम्पर्कमा आए अन्य रोग सरह नै निको हुने बताउँछन् ।
एनआरएन न्यू–साउथ वेल्सका संयोजक तथा एनआरएन उपाध्यक्ष नन्द गुरुङले यस्तै समस्यामा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नका मानसिक रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्स आदिको संलग्नता रहेको हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । यसले मानसिक रोगबाट समस्यामा रहेका नेपालीहरूलाई विभिन्न काउन्सिलिङका साथै आवश्यक सहयोगी संस्थाहरूमा रिफर गरिदिन्छ । यसैगरी मानसिक रोगका कारण समस्यामा रहेकाहरूका लागि नै सहयोग गर्ने उद्देश्यले अस्ट्रेलियाभर वाक फर वेलफेयरको आयोजना एनआरएनको महिला संस्था नारी निकुञ्जले गरिरहेको छ ।
यसको न्यूनीकरण र रोकथामको प्रमुख उपाय सूचना, सहयोग र उपचार नै भएकोमा सबै एकमत छन् भने विद्यार्थी नै मुख्य व्यवसायको स्रोत भएका कन्सल्टेन्सीहरूले समेत विद्यार्थीहरूलाई समयअनुसार आवश्यक सम्पर्क, सल्लाह, सुझाव र आवश्यक सहयोग जुटाइदिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यहाँ आएका विद्यार्थीहरूले नै सही जीवनयापन, राम्रा साथी, सीमित महत्वकांक्षा र सहज सामाजिक जीवन बिताउने प्रयास गर्ने हो भने मानसिक समस्याबाट धेरै हदसम्म मुक्त भइने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
रोगसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव छ
डा. घनश्याम चापागाईं
म अहिले अस्ट्रेलिया सरकारको सिड्नीस्थित टेबलल्यान्डस मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छु र म दैनिकजसो बिभिन्न प्रकारका मानसिक रोगीको उपचारमा संलग्न हुन्छु, जसमा नेपालीहरूको संख्यासमेत उल्लेख्य छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारको तथ्यांकअनुसार अहिले ५ जनामध्ये १ जना मानसिक रोगी छन् र नेपालीहरूको संख्यासमेत यसकै हाराहारीमा छ । नेपालीहरूमा देखिएको खास समस्या भनेकै रोगलाई स्वीकार नगर्नु र रोग लागेको पत्ता लागे पनि समयमै उपचार नखोज्नु हो । मानसिक रोग अन्य रोगहरू जस्तै सामान्य रोग हो । यो पनि समयमै उपचार गर्ने हो भने निको हुन्छ भन्ने जनचेतनाको अभाव नेपालीहरूमा टड्कारो छ ।
मानसिक रोगका चिकित्सकहरूकहाँ उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी सुरुको समयमाभन्दा पनि रोग बढिसकेपछि मात्र आउने भएकाले समस्या चर्को हुने गरेको छ । एकातिर मानसिक रोगको उपचारका लागि नेपाली विशेषज्ञ भेट्न नचाहने प्रवृत्ति र अर्कातिर मानसिक रोग भए पनि यसलाई कमजोरीका रूपमा लिने र स्वीकार नगर्ने चलन नेपालीहरूमा भएको मेरो अनुभव छ ।
म अहिले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली चिकित्सकहरूको संस्थाको अध्यक्षसमेत हुँ । हामीले एनआरएनसँग मिलेर मानसिक आदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छौं, जसअनुसार हामीले विभिन्न राज्यमा जनचेतना, उपचार आदिका सेवा–सुविधाहरू प्रदान गर्नेछौं । त्यतिमात्र नभएर जनचेतना बढाउन सकियो र सबै जना यो रोगको निवारणमा लाग्न सकियो भने यसमा केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
प्रकाशित :भाद्र २७, २०७५
अस्ट्रेलियामा बक्स अफिस फिल्म फेयर एवार्ड हुँदै
डिप्रेसनले यौन असन्तुष्टि, यौन असन्तुष्टिले डिप्रेसन
एक्लिँदै छन् कपिल
लुकिछिपी ट्रान्स पार्टी चैत्र २०, २०७५
सामाजिक सञ्जालका हिरोहरू चैत्र १४, २०७५